Dhageyso Sarsborg: Dhacdadii uu xalay ninka soomaaliga dadka ku laayay mindida. - NorSom News
Dhageyso Sarsborg: Dhacdadii uu xalay ninka soomaaliga dadka ku laayay mindida.
Nin asal ahaan soomaali ah oo la xaqiijiyay inuu maskax ahaan xanuun u qabay, ayaa xalay sadex qof mindi ku dhaawacay magaalada Sarborg ee dalkan Norway. Waxaana markii danbe geeriyootay mid kamid ah sadexdii qof ee dhaawaca ahaa, halka xaalada qof kalena ay adagtahay, sida ay boolisku sheegeen.
Waxaan khadka telefoonka ee magaalada Sarsborg ku wareysanay Mahad Abukar Osman oo kamid ah siyaasiniinta kunool magaalada Sarsborg, kana tirsan xisbiga MDG ee gobolka Viken.
Previous articleIsbitaalka: Mid kamid ah dumarkii uu ninka soomaaliga dhaawacay oo isbitaalka ku geeriyootay.
Next articleDaawo: Gabar Sheybaariiste soomaali ah oo lagu amaanay shaqada kahor tagista corona-virus.